Zon'olombelona · Febroary, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Febroary, 2015
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Febroary, 2015
Karaibiana Mpianatra Lalàna, Mirotsaka Miady Amin'ny Fanondranana Olona
Karaiba 28 Febroary 2015
"Ninoanay fa tsy dia nahazo loatra ny fahatakàrana tokony nomen'ny rehetra azy ny fandinihana ny olan'ny fanondranana olona, ary andraikitray ny misarika ny saina hifantoka amin'izy io."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Febroary 2015
Matetika miatrika fanavakavahana mieli-patrana sy miaina fanilikilihana ataon'ny Iraniana ireo mpitsoa-ponenana Afgàna ao Iran. Ka natomboka ny hetsika #menatra ho fanoherana izany.
Azia Afovoany sy Kaokazy 25 Febroary 2015
Tamin'ny 22 Febroary - andro tsy fiasana tao amin'ny firenena - noterena namonjy valan-javaboahary iray ao an-toerana ao Dushanbe tamin'ny 8 ora maraina ireo mpiasam-panjakana, mpianatra ary ny mpianatry ny oniversite araka ny tati-baovao.
Tafody Soa Aman-tsara Ary Efa Niverina Niasa Ilay Tajik Mpanampy Mpitsabo Nalaina An-keriny Tao Yemen
Azia Afovoany sy Kaokazy 24 Febroary 2015
Tsy dia fandre matetika ao Tajikistan ny fiafaran-javatra mahafinratra, ka raha miseho izany dia tokony hankalazaina.
Fanjavozavoana Manoloana Ny Famonoana Ho Faty An'i Saman Naseem Ao Iran
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Febroary 2015
Niparitaka tamin'ny aterineto ny tatitra marobe mifanipaka momba ny famonoana an'i Naseem sy ny hoe mbola any am-ponja izy.
Afrika Mainty 23 Febroary 2015
Voampanga Ho Nanararaotra Ireo Mpifindra Monina AFrika Atsimon'i Sahara Ny Mpitandro ny Filaminana Maraokanina
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Febroary 2015
"Nisy fiara fitateram-bahoaka enina niandry anay, nasaina niakatra tao anatin'izany fiara izany izahay. Avy eo, naharitra ora maromaro ny nitondrana anay tany amin'ny tany foana. Tsy fantatray izay toerana nalehanay." Hoy ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny mpifindra monina iray.
#SaveSaman: Ezaka Farany Hamonjena An'i Saman Naseem Ao Iran Tsy Hovonoina Ho Faty
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Febroary 2015
Nisy ny antso maika hanaovana hetsika hampitsaharana ny fanamelohana ho faty an'ilay tovolahy Saman Naseen, voasambotra teo amin'ny faha-17 taonany (22 izy izao), noho ny naha-mpikambana azy tao anaty vondrona mpanohitra mitam-piadiana. Nanao antso ny Amnesty International mba hanaovana hetsika hanakanana ilay famonoana kasaina hatao anio Zoma 19 Febroary